नेपालमा थप ३६ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, संक्रमितको संख्या ५८४ पुग्यो - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
नेपालमा थप ३६ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, संक्रमितको संख्या ५८४ पुग्यो
काठमाडौं । नेपालमा थप ३६ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ । शनिबार मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले थप ३६ जनामा कोरोना पुष्टि भएको बताए।
प्रवक्ता देवकोटाले सेती अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा चार जना, कोशी अस्पतालमा झापाका ३३ वर्षका पुरूष, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बाँकेका ६ जना, नैनापुरका १५ जना, नैनापुर १ मा ६ जना, बर्दियामा एक १९ वर्षीय पुरूष र सुर्खेतमा दुई पुरूष र एक महिला गरी तीन जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको हो।
उनीहरु संक्रमणको आशंकामा सेती अस्पतालको आइसोलेसमा थिए। उनीहरुको आरडीटी रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि पीसीआर विजधिबाट परीक्षण गर्दा पनि पोजेटिभ नै आएको प्रवक्ता देवकोटाले बताए। संक्रमित २० वर्षीय २ जना २२ वर्षीय १ र २७ वर्षीय १ गरी चार पुरुष रहेका छन्।
त्यस्तै कोशी अञ्चलको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा झापाको झापा गाउँपालिकाका डिल्लीराज मावि क्वारेन्टिमा रहेका ३३ वर्षीय पुरुषको रिपोर्ट पनि पोजेटिभ आएको छ। यो सँगै संक्रमितको ५८४ संख्या पुगेको छ । संक्रमण देखिएका मध्ये ३ जनाको निधन भएको छ।
जीप दुर्घटनामा परी गाउँपालिका अध्यक्ष सहित ५ को मृत्यु
संखुवासभा, । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका ३ सामाटारमा जीप दुर्घटना हुँदा मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग […]
एन्फा अध्यक्षमा कर्माछिरिङ शेर्पा निर्वाचित,थापा युगको अन्त्य
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को अध्यक्षमा कर्माछिरिङ शेर्पा निर्वाचित भएका छन् । शनिबार सम्पन्न […]
तीन दलकै कारण माघ ८ मा संविधान बन्दैन : अध्यक्ष थापा
चितवन, २५ कात्तिक । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले काङ्रेस,एमाले र एमाओवादी तीन […]
शिखरको विन्टर सेल मेलामा फ्याक्ट्रीकै उत्पादन मूल्यमा जुत्ताचप्पल उपलब्ध, किन्न अाउने सर्वसाधारणको घुँइचो
काठमाडौं । शिखर सुजले राजधानीको भृकुटीमण्डपमा लगाएको विन्टर सेल मेलामा जुत्ताचप्पल किन्न सर्वसाधारणको […]
विश्वकप: विश्वकप फुटबलमा प्रि-क्वाटरफाईनलका खेल सकिंदै,जाेगिएला इंग्ल्याण्ड?
काठमाडौं । विश्वकप फुटबलमा प्रि–क्वाटरफाईनल अर्थात राउण्ड अफ सिक्सटिनका खेल आज(मंगलबार) सकिंदैछन् । आज प्रि […]
संसद् सञ्चालन खर्च कति ?
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का दुई सदनको सञ्चालन खर्च वार्षिक एक अर्ब ७० करोड रुपियाँ हुने भएको छ । यो खर्च […]